Oromo Free Speech: Wayyaaneen Ergamtoota Bobbaafte!
bilisummaaf, wal qixxummaa fi mirga abbaa biyyummaa ofitiif dhaabbannaan hidhaman ni hiikkatu, madaahan ni fayyu, du’anis ni galu. Dhugaan injifataadha. Inni dhugaa qabatee qabsaawe, inni walqixxummaaf wareegame, inni mirga abbaa biyyummaaf dararame yoomiyyuu taanaan kufee hin hafu.
Posted by Oromo firee speech at 4:06 PM